နေအိမ် » တိုက်ပွဲတွေ » Portal Defenders game
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Portal Defenders game
ကစား: 38,930 tag ကို: တိုက်ပွဲတွေ, fighting games, ကာကွယ်ရေးဂိမ်း, ကာကွယ်မှု, Portal, Defenders game
တိုက်လေယာဉ်တောင်ပံ4ရှင်ဘုရင်၏
သငျသညျကိုမှန်ကန်တိုက်လေယာဉ်အားရင်ဆိုင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား ဒီဂိမ်းမှာတော့အရာအားလုံးကိုမှန်ကန်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအသသေမှီတိုင်အောင်စစ်တိုက်ခြင်းငှါတတ်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး Invite နှင့်အတူတူဒီဂိမ်းကစား။ ရုံအားလုံးသင့်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုပစ်နှင့်ကစားရန်စတင်!
ဒါက 80 ရဲ့တစ်ဦးထံမှအံ့သြဖွယ်ဂန္ Arcade ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လက်သီးကို အသုံးပြု. လမ်းဂိုဏ်းဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တယ်။ ရွှေ့ဖို့မြှားခလုတ်များကိုအသုံးပြုပါ။ ဤနေရာသို့သွားရန်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏လျှို့ဝှက်ချက်တန်ခိုးနှင့်ဝင်တိုက်ဖို့ Z နဲ့ X တို့မှာစာနယ်ဇင်းသုံးပြီးထိမှန်။
တိုက်လေယာဉ်ရှင်ဘုရင်: Dino သပိတ်
မကောင်းသောအ henchmen ၏လမ်းများရှင်းလင်းနှင့်၎င်းတို့၏ချုပ်ကိုင်ထံမှစက်ရုပ်ဒိုင်နိုဆောလွတ်!